Iindaba zaseCofttek -Izongezo zokutya ezongeziweyo ngezinto ezingafunekiyo
Emva kohlolisiso lwango-2019 kugqityiwe ukuba iNicotinamide Mononucleotide ikhuselekile ekusetyenzisweni ngabantu ukuba ukusetyenziswa kwayo kuthintelwe kumda obekiweyo, iinkampani ezininzi zokuvelisa zingene kwimarike kunye neminikelo yazo. Oku kugqithisela ekukhetheni kushiye abathengi bedidekile malunga nokuba yeyiphi iNictonimade Mononucleotide (NMN) eyongezelelekileyo ebalungeleyo. Ngokoluvo lwethu, olona nyango lulungileyo lokuguga lukaNico ...
Ukuba ujonge isongezelelo esilungileyo seMagnesium L-Threonate, sincoma ukuthenga i-Magnesium Threonate powder evela eCofttek. Inkampani ithi iphucula i-bioavailability ye-magnesium emzimbeni. Inkampani ikwabanga ukuba umgubo obonelelwa yinkampani uxhasa umsebenzi wememori kunye nokuphucula umsebenzi wokuqonda ngokubanzi. Bakwanceda abasebenzisi ukuba balale ngcono. I-Cofttek ngababoneleli beMagnesium L-Threonate ...
Ukuba ujonga umgubo ophakamileyo wePalmitoylethanolamide (PEA) othengiswayo, uya kuba kwindawo elungileyo. Singomnye wabenzi bePalmitoylethanolamide (PEA) abadumileyo, abanolwazi nabanamava eChina. Sinikezela ngeemveliso ezinyulu nezipakishwe kakuhle ezihlala zivavanywa lilabhoratri yomntu wesithathu ekumgangatho wehlabathi ukuqinisekisa ubunyulu nokhuseleko. Sisoloko sihambisa iiodolo ngaphesheya kweMelika, iYurophu, ...